के कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लकडाउन सही फैसला हो ?
कोरोना भाइरस अहिले विश्वमा जुन गतिमा फैलिएको छ, विभिन्न देशहरुले त्यही गतिमा तयारी पनि अगाडि बढाइरहेका छन् । फलस्वरुपः कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएका मुलुकहरुमा लकडाउन पनि गर्न थालिएको छ । र, यो सुरुवात कोरोना भाइरस पहिलो पटक देखिएको चीनबाट नै भएको थियो ।
त्यसपछि अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, बेलायत, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, पोल्यान्ड तथा स्पेनले पनि कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि यही तरिका अपनाए ।
अनि नेपालले पनि अहिले यही उपाय अपनाएको छ ।
तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनका एक अधिकारीले लकडाउनबारे प्रश्न उठाएका छन् । स्वास्थ्य संगठनका कार्यकारी निर्देशक माइक रायनले भनेका छन् कि कोरोना भाइरसलाई रोक्न लकडाउन मात्र प्रभावकारी तरिका होइन ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्समा प्रकाशित एक समाचारमा रायनको भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ । त्यसमा उनले भनेका छन्, ‘लकडाउनका साथसाथै सबै देशले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि राम्रो परीक्षण पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । किनकि जब लकडाउन सकिन्छ, तब फेरि कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।’
रायनले यो जवाफ अमेरिकाको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा दिएका हुन् । उनले बताएका छन् कि मानिसहरुलाई घरमा राख्दैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिन्छ नै भन्ने छैन ।
अब नेपालमा चाहिँ के होला ?
पक्कै पनि नेपाल सरकारले लिएको यो कदम निकै प्रशंसनीय कदम हो । यसले नेपालमा संक्रमण फैलिने कुरामा कमी ल्याउने पक्कापक्की छ ।
तर, अब सँगसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस देखिएकी फ्रान्सबाट फर्किएकी १९ वर्षकी ती युवतीले यसबीचमा कोकोसँग भेटिन्, उनीसँग विमानमा आएका मानिसहरु कोको थिए भन्ने पहिले पत्ता लगाउनु पर्ने र उनीहरुलाई पनि ट्र्याकिङ गर्नु पर्ने सरकारको जिम्मेवारी रहेको छ । यो सब कुरा हुँदा र नेपालीहरुको स्वास्थ्य राम्रोसँग परीक्षण गरिँदा मात्र यो लकडाउन राम्रो सावित हुनसक्छ । अन्यथा यसले पनि सोचेको जस्तो परिणाम दिने छैन ।